Fampahalalahan'ny Mponina ao amin'ny Cameras Vahaolana OMG
Ny fakantsary mipetraka ao amin'ny cameras
Ny foto-kevitry ny besinimaro momba ny fakan-tsary mitafy vatana dia angatahina tsindraindray, ireo masoivoho fampiharana ny lalàna dia nanandrana fotsiny izay tadiaviny ny fisainany ny fakan-tsary vatan'ny vatana. Ankoatry ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana sy ny fotoana tsy navela hanana rakitsoratra. Misy ny eritreritra hafa amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny momba ny fampiasana ireo fakantsary ireo.
Rehefa natao ny valim-pikarohana dia ireo mpamaly izay nitafatafa azy dia nilaza fa hanohana ny fampiasana fakantsary vita amin'ny vatana. Nisy ihany koa ny tatitra fa ny ankamaroan'ny mpamaly dia nilaza fa ny fakantsary raikitra vatana dia hanatsara ny porofo, ny mangarahara, ny kalitaon'ny fitsaboana, ny fitondran-tena amin'ny polisy, ny fanarahan-dalàna, ny fanarahana ny toetran'ny olom-pirenena sy ny polisy. Voalaza ihany koa fa hampihena ny fitarainana sy ny faharatsiana koa izay nisy olana. Mino ihany koa fa ny fampitana ny besinimaro ho an'ny fakantsary vatana dia nihatsara fa tsy ny fijerin'ny olom-pirenena ny fakan-tsary vita amin'ny vatana ihany koa ny kalitao fitsaboana, ny fitondran-tena, ny fanarahan-dalàna ary ny kolikoly ihany koa.
Nisy fakantsary raikitra napetraka napetraky ny polisy tany amin'ireo firenena toa an'i Etazonia, Australia ary ireo firenena eoropeana.
Vokatry ny fakan-tsary vita vatana
Fahatsiarovan-tena: izany dia mila fahatsapan-tena fa efa nojerena ianao, izany no fantatra koa amin'ny maha-zava-dehibe ny fananana ny tanjona. Mitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny ankapobeny rehefa mahita ny olona fa mijery azy ireo. Miseho ny fanovana fitondran-tena ary misy ny fifanarahana amin'ny fihetsika azo ekena ara-tsosialy, amin'izany dia voaporofo fa izay rehetra mahatonga ny fifantohana iray amin'ny tena dia mampitombo ny fahatsiarovan-tena. Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia iray amin'ireo fomba maro hampitombo ny fahatsiarovan-tena sivily ary mampahafantatra azy ireo fa ny fihetsika nataony dia jerena sy raisina. Fomba iray ahafahan'izy ireo misakana ny tsy hanao ratsy sy hanohintohina ny lalàna.
Ny fikarohana avy amin'ny fandinihana dia nanaporofo fa ny 87% dia manaiky fa ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia hanatsara ny fihetsiky ny polisy, ary ny 70% koa dia miombon-kevitra fa hanatsara ny fomba itondran'ny olom-pirenena ny fihetsik'izy ireo amin'ny polisy. Ny mpikaroka dia nanatsoaka hevitra ihany koa fa ireo manana fiheveran-tena ratsy ataon'ny polisy dia tena hanohana ny fakantsary vita amin'ny vatan'ny vatana, satria mahatsapa izy io fa fomba iray hanampiana ny lozabe ary hampiakatra ny fangaraharana ihany koa. Saingy lasa gaga raha ny mifanohitra amin'izany no raharaha, ny olom-pirenena tia ny polisy dia ny tena manohana fakan-tsary mitafy vatana, ireo izay mahatsapa fa nanao asa tsara dia ireo izay nanohana betsaka. Ny vokatra iray hafa izay tsy mbola fantatra mialoha dia ny tsy fahafantaran'ireo olom-pirenena ireo izay tena miahiahy momba ny heloka bevava manodidina ny tombontsoa azo avy amin'ny fakan-tsary vita amin'ny Vatana. Saingy hoy ny mpikaroka; ny fahatsapana dia misy ifandraisany amin'ny fifandraisan'izy ireo ankolaka, sy ny fomba nandraisan'ny polisy ireo olana taloha. Izy io dia nifandraika tamin'ny fahatraran'ny polisy, tahotra ny heloka bevava ary ny fiheverana fa tsy manao asa tsara ny polisy. Noho izany dia mino izy ireo na dia amin'ny fakantsary vatana aza dia mbola tsy manao tsaratsara kokoa izy ireo.
Tao amin'ny faritany morontsiraka amoron-dranomasina, nalaina am-bavany ny mponina ary natao ny fikarohana, dia nino ny mponina tao fa ny fakantsary nitafy vatana dia tena hampitombo ny fiarovana ho an'ny manampahefana sy ny mponina ary manao ny vondron'izy ireo na dia tsy misy atahorana aza. Mino ny mponina fa ny fakantsary fitafy vatana no:
Manatsara ny fihetsika mpiandraikitra sy mponina
Ampitomboy ny ara-dalàna omen'ny polisy
Manatsara ny kalitaon'ny porofo voangona
Mino ihany koa ireo mponina fa ny fampiasana ity fakantsary ity dia mety hampihena ny fampiasan'ny manamboninahitra iray mandritra ny fihaonany amin'ny olom-pirenena.
Raha ny fikarohana dia natao tao andrefan'ny Palm Beach, ny mponina tao dia samy manana ny fomba fihevitra hafa momba ny fihaonan'ny polisy-vondron'olona, ​​ny fahombiazan'ny polisy ary koa ny olana momba ny asan-jiolahy sy ny fiarovana. Ny mponina teo dia nitatitra fa tsy ankasitrahan'ny olona ny fahitan'izy ireo ny fahamarinana sy ny fahitsiana ataon'ny polisy eo an-toerana. Mino izy ireo fa tsy mifampiraharaha tsara amin'ny raharaha lehibe ny polisy, ary nolazaina fa olan'ny tanàna koa. Voalaza ihany koa fa eny an-dalana, ny polisy any an-toerana dia manakana ny olona tsy misy antony tsara ary matetika mampihatra fahefana rehefa aseho ny fanoherana. Marihina fa ireo fisehoan-javatra ireo dia tena fahita any andrefana ary ny fakantsary raikitra vita amin'ny vatana dia nampidirina hiadiana amin'ny olana tahaka izao.
Nisy ny fanoloran-kevitra nandritra ny taona maro fa ny antony nahatonga ny fampihenana ny fitarainana tamin'ny herin'ny polisy dia tena lehibe tokoa noho ny fakantsary mandeha amin'ny vatana. Voalaza fa miteraka izay matetika antsoina hoe "ny sivilizasiona". Izy io dia mifehy ny zavatra nohazavaina tany aloha hoe; rehefa fantatry ny olona fa izy no jerena dia mirona amin'ny fitondran-tenany tsara indrindra. Marihina fa ny fidiran'ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia mety hampihena ny fitarainan'ny olom-pirenena satria ny teratany dia tokony hametraka tranga tsy dia misy dikany ary tsy manao fitarainana sandoka.
Ny maha-ara-dalàna ny polisy dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fampiasana fakan-tsary vita amin'ny vatana. "Ny maha-ara-dalàna ny polisy dia voafaritra ho fananana ara-tsaina an'ny fahefana, andrim-panjakana na koa fandaminana ara-tsosialy izay mitarika ireo mifandray aminy hino fa mety, mety sy marina" (Tyler, 1990 p. 375). Noheverina ho manana lanjany lehibe tokoa izy satria mahay mamolavola fihetsika sy fitondran-tenan'ny olom-pirenena. Rehefa mandeha ny fotoana dia olona maro no hita fa nifanaraka tamin'ny polisy, izany dia satria maro no mahalala fa mitondra fitaovam-pitsikilovana tena be pitsiny izy ireo ary hialana amin'ny olana amin'ny porofo izay hatsangana hanoherana azy ireo. Ny fakantsary raikitra an-davan'ady dia anisan'ireo fitaovana marobe izay nahatonga ny olom-pirenena hanaraka ny fanadihadiana sy ny fifandraisan'ny polisy.
Ny mpitsikera dia nanondro olana isan-karazany izay misy fiantraikany sarotra ahitana ny fiainana manokan'ny olom-pirenena, fidirana amin'ireo rakitsoratra manokana ary ny firaketana ny olona marefo eo amin'ny ankizy. Ireo olan'ny mpitsikera dia ny olana nipoitra avy amin'ny fampiasana fakantsary raikitra eo amin'ny fiaraha-monina. Vokatr'izany dia manome fiofanana hentitra ny masoivoho mpampihatra lalàna ary manana fitsipika sy politika momba ny fampiasana ireo fakan-tsary mba tsy hisian'ny olana eo am-piezahana mamaha ny iray.
Ny fakantsary mipetraka ao amin'ny cameras no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin